Yongeza izinto ezigqithisileyo eziqingqiweyo ezithile zecandelo eliprintiweyo kunye nebala elikhanyayo
I-sparnish indawo iyimpembelelo ekhethekileyo ebeka i-verarn kuphela kwimimandla ethile yecandelo eliprintiweyo. Sebenzisa i-varnish yebala ukuba wenze umfanekiso upaphe iphepha eliprintiweyo, ukugqamisa iifake ze-drop, okanye ukudala imifanekiso okanye imifanekiso efihlakeleyo kwiphepha. I-spot izambatho zicacile kwaye zidla ngokugqithiseleyo, nangona ingaba yinto enzima. Ezinye iiprojekthi eziprintiweyo zingabandakanya zombini i-gloss kunye ne-matte indawo ye-varnishes ngeziphumo ezizodwa. Kwiprogram yokwakheka kwiphepha, ucacisa indawo ye-varnish njengombala wendawo entsha.
Kumashishini wokushicilela, endaweni yokuba udibanise ipeyinti yombala eyenziwe kwifayili yedijithali enenki enemibala, umsebenzisi we-press uyisebenzisela ukusebenzisa i-varnish ecacileyo.
Ukusekela i-Spot Varnish Plate kwi-Software Layout Software
Amanyathelo asemgangathweni afanayo asebenza kuyo nayiphi na inkqubo yoqwalaselo lwephepha oyisebenzisayo:
Yakha umbala ombala wendawo.
Kwiphepha lesicelo sakho sephepha, vula ifayile yedijithali equle umsebenzi wokushicilela kwaye udale umbala ombala wendawo. Qamba igama elithi "Varnish" "okanye" "Spot Varnish" okanye into efanayo. "
Yenza umbala omtsha umbala nawuphi na umbala ukuze uwubone kwifayile.
Nangona i-varnish inene ebonakalayo, ngenjongo yokubonisa kwifayile, unokwenza ummeli wendawo yayo kwifayile yakho yedijithali malunga nanoma yimuphi umbala. Kumele kube ngumbala wendawo, nangona, kungekhona umbala we-CMYK.
Ungaphindi umbala webala osele usetyenzisiweyo.
Khetha umbala ongasetyenziswanga kwenye indawo kwipapasho yakho. Unokufuna ukwenza umbala okhanyayo, ocacileyo ukuze uvele ngokucacileyo kwisikrini.
Ukugqithisela umbala wakho webala logciniweyo.
Beka umbala omtsha ukuba "ugqithise" ukukhusela i-varnish kwindawo yokungabikho naluphi na umbhalo okanye ezinye izinto phantsi kwe-varnish.
Faka indawo yendawo yokugcoba kwindawo yokubeka. Ukuba isofthiwe yakho isekela izalathisi, faka umbala wendawo kwindawo ehlukeneyo ukusuka kuyo yonke yakho uyilo.
Yakha izakhelo, iibhokisi okanye ezinye izinto zephepha uze ugcwalise umbala wengubo. Emva koko ubabeke apho ufuna ukuba i-varnish ibonakale kwisiqwenga sokugqibela. Ukuba isalathisi sekhasi sele sinebala-njengesifanekiso okanye isihloko-kwaye ufuna ukufaka i-varnish phezu kwalo, yenze impinda yento ngokuthe ngqo kwi-original. Faka isicelo sombala we-vernita kwi-duplicate. Sebenzisa le ndlela yokuphindaphinda apho ukulungelelaniswa okufutshane kwendawo yokugcoba kunye nenxalenye phantsi kwe-varnish kubalulekile.
Thetha kumshicileli wakho malunga nokusetyenziswa kwe-varnish.
Qinisekisa ukuba inkampani yakho yokushicilela iyazi ukuba usebenzisa i-varnish kwindawo yakho phambi kokuba uthumele ifayile. Inkampani ingaba neemfuneko ezikhethekileyo okanye iziphakamiso zokuphucula indlela iprojekthi yakho ephuma ngayo.
Iingcebiso zokuSebenza ne-Spot Varnish kwiiFayile zeDajethi
Ungayisebenzisi inkqubo yokubhenqa umbala kwiindawo zakho zobuninzi.
Yakha umbala wendawo, kungekhona umbala wenkqubo, kwindawo yokugcoba. Kwi-QuarkXPress, i-Adobe InDesign okanye nayiphi na isofthiwe yesakhiwo sephepha isetyenzisi sebala sobhenqo njengombala "obala".
Thetha kumshicileli wakho.
Qhagamshelana nenkampani yakho yokushicilela nayiphi na imfuno ekhethekileyo okanye iziphakamiso malunga nendlela inkampani inokuthanda ngayo ukufumana iifayile zakho zedijithali ezinemibala egciniweyo ecacileyo, kunye neengcebiso zoluhlobo lwe-varnish ezisetyenziselwa ukupapashwa kwakho.
I-spot i-varnish ayibonakali kubungqina.
Unokuba usebenza "ebumnyameni" xa usebenzisa i-varnish yebala. Ekubeni ubungqina abuyi kukubonisa indlela umphumo ogqityiweyo uza kukhangela ngayo, awuyi kukwazi de ukugqiba nokuba ngaba ungeyiphumo oyifunayo.
Ukongeza i-vernish spot kwandisa iindleko zomsebenzi.
Ukusetyenziswa kwendawo yokugcoba i-sparnish yongeza iplati eyongezelelweyo kwinkqubo yokushicilela, ngoko-ke umshicilelo usebenzisa umshicileli wenkqubo ye-4 uza kufuna iiplati ezintlanu, kunye nomsebenzi ombala o-4 kunye neefarnate ezimbini zifuna iiplate ezithandathu.
Yintoni iVisual Basic?
Bonisa i-PDF kunye neVB.NET
I-NaN, Infinity, kunye nohlu lweZero kwiVB.NET
I-Vb.Net Sender kunye ne-E Events Parameters
Ukudala i-Components Control Components kuVB.NET
Ziziphi izibonelelo ze-VB.NET kwaye Ndingayisebenzisa njani?
Ukuchonga iMagnolias evamile
Iingcali ezili-10 ezidumiweyo ezisekhohlo: Ingozi okanye iNtshabalalo?
Umshini wokuHlanganisa oMnyama we-Blackjack
Iingcwele ezisixhenxe zeCawa yamaKatolika
Izinzuzo zeMfundo yeBhodi yeBhodi
Usuku loMongameli lweeNkcazo
Uluphi uMoya Obubele?
Isicwangciso sabathengi basekhaya
Izifundo ezichaziweyo zabafundi beNgesi
U-Eridu (Iraq): Isixeko sokuqala eMesopotamia kunye nehlabathi
Izinto Ezi-5 Ongezi Ngayo NgeliphuphaUkuhamba Kwezithombe
I-Top 10 Bass Fishing kwiLake Guntersville
Izipho zeeLolks Abathanda
I-Typology ye-Tennis Shots